हिरोइन भन्दा कम छैन’न् विश्व’कै धनी विल गेट्सकी छोरी, तर उनको जीवन सैली र रुची चाहिँ अचम्मको! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /International/हिरोइन भन्दा कम छैन’न् विश्व’कै धनी विल गेट्सकी छोरी, तर उनको जीवन सैली र रुची चाहिँ अचम्मको!
घुमफिर उनको ग्ल्यामरस लाइफको हिस्सा नै हो । पछिल्लो एक वर्ष उनले आफ्नो ब्वाइफ्रेण्ड नाएल नस्सरसँग घुमफिरका तस्विरहरु सोसल मिडियामा सेयर गरेकी थिइन् । नाइल पनि प्रसिद्ध शो जम्पर हुन् । जेनिफरले इन्स्ट्राग्राममा उनको फोटोहरु सेयर गरेर भनेकी छन्, ‘कसैलाई थाहा छैन् कि हाम्रो अफिसियल डेटिङ एनिभर्सरी आज हो वा भोलि । तर यसले कुनै फरक पर्दैन् । तिमीसँग म हरेक दिन खुशी छु ।’